Fitsaboana : Tokony hoentina hanaovana famindrana voa any ivelany i Eric Fou Hehy -
AccueilSosialyFitsaboana : Tokony hoentina hanaovana famindrana voa any ivelany i Eric Fou Hehy
Fitsaboana : Tokony hoentina hanaovana famindrana voa any ivelany i Eric Fou Hehy
08/05/2018 admintriatra Sosialy 0
Efa ho herinandro vitsivitsy izao no manaraka fitsaboana etsy amin’ny HJRA Ampefiloha Eric Rakotoarimanana, na i Eric Fou Hehy. Aretin’ny tsy fahampian’ny fiasan’ny voa no manjo azy, izay tokony hoentina hanaovana famindrana voa any ivelany. Hatramin’ny nidirany tetsy amin’ny HJRA dia efa nanao antso avo tamin’ny rehetra izy ny amin’ny fanohanana azy na ara-bola, na ara-bavaka amin’ny fiatrehana io aretina io. Mbola mitohy izany antso izany amin’ny fiatrehana io fandidiana atao any ivelany io. Manodidina ny 30 000 Dolara na manodidina ny 99 000 000 Ar ny saran’ny fitsaboana. « Mbola tsy ao anatin’izany ny saran’ny fijanonana any sy ny fandaniana samihafa », araka ny fanazavana nentin’i Honorat, mpikambana ao amin’ny tarika Fou Hehy.
Fantatra fa hiezaka ny hanao hetsika ho fanohanana azy ireo mpanakanto namany. « Mbola eo am-pandinihina izay tokony hatao izahay amin’izao fotoana. Hamory ary hiaina amin’ireo mpikarakara seho samihafa izahay ny zoma izao amin’ny 12 ora antoandro etsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary », hoy ihany izy. « Mbola betsaka ny ezaka atao ka hiantsoanay ireo malala-tanana rehetra, ary isaorana ireo efa nitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana azy », hoy hatrany i Honorat.
Na eo aza izany hetsika izany dia mbola ezaka goavana ny hikarohana io saran’ny fitsaboana io. Hatramin’ny nidiran’i Eric Fou Hehy etsy amin’ny HJRA dia efa nisy ny fahafahan’ireo afaka manampy azy amin’ny alalan’ny M’Vola 034 04 030 53. Etsy ankilan’izay dia efa misy ihany koa ny vata mipetraka azo handrotsahana izay foy etsy amin’ny biraon’ny RDJ etsy Analakely.
Izahay eto amin’ny Gazety Triatra dia mirary fahasalamana ho an’i Eric.